Graphic Dhizaini Dhizaini Iyo Noobs Kazhinji Inogadzikana | Martech Zone
Ini ndakaseka zvishoma pandakawana iyi infographic nekuti, sezvazvinoitika, ndinofanirwa kuve graphic dhizaini noob. Asi, maiwe, zvinoshamisa kuona kuti ndisingazive zvakadii nezveindasitiri yandakapinzwa zvakadzika mukati memakore 25 apfuura. Mukuzvidzivirira kwangu, ini ndinongobata chete uye ndinokumbira mifananidzo Nekutenda, vagadziri vedu vane ruzivo rwakanyanya nezve graphic dhizaini kupfuura zvandiri.
Iwe unofanirwa kuziva musiyano uripo pakati peaya anowanzo sanzwisiswa mazwi kune graphic dhizaini mazwi nekuti zvifunge, hausi kungova mushambadzi uye dhizaini, iwe uri munyori zvakare. Iwe unofanirwa kuziva zvinhu zvako! Aamina Suleman
Aamina nechikwata pa ThinkDesign isa pamwechete ichi chikuru chinoonekwa chepamusoro gumi nemana chisina kunzwisiswa kana zvisirizvo mazwi anoshandiswa naoob graphic vagadziri.
Fonti inopesana Typeface
Typeface haisi font, asi font inogona kunge iri yemhuri ye typeface.
Kuchengeta maringe neKerning
Kuchengeta ndiyo yunifomu nzvimbo pakati peboka retsamba, kerning ndiyo nzvimbo pakati pevanhu voga.
Gradient maringe Gradient Mesh
Iyo gradient iko kushanduka zvishoma nezvishoma kubva pane rimwe ruvara kuenda kune rimwe pamusoro pechimiro chechimiro. Iyo gradient mesh chishandiso chinogadzira mesh pachimiro ine akawanda, anogadziriswa mapoinzi ayo anotendera iwo mavara, shading, uye epamhedzisiro mhedzisiro.
Kumashure maringe neRuseri
Kumashure kunoreva jira kana jira rakaturikwa kuseri kwechinhu, asi kumashure chero chinhu chiri kuseri kwechinhu chakatariswa mumufananidzo kana dhizaini.
EPS maringe neAI
EPS yakavharidzirwa zvinyorwa, fomati fomati iyo inochengetedza yakatsetseka vector mifananidzo uye haitsigire kuve pachena. AI iri Adobe Illustrator fomati iyo ine yakarongedzwa vector kana yakadzamidzirwa raster zvinhu zvinogona kugadziriswa uchishandisa Illustrator.
Tint maringe neToni
Tint inogadzirwa nekuwedzera chena kune rakachena ruvara, ichiwedzera kureruka kwayo. Tone ndiyo chroma yevara, inogadzirwa kana grey ichiwedzerwa kune iro ruvara.
Lettermark maringe neWordmark
Mutsamba chiratidzo chinogadzirwa nematanho akasarudzika etsamba dzakadai sekutanga kana kupfupisa. Izwi rechiratidzo rakasarudzika typographic kurapwa kunoiswa kune iwo mavara mune yemakambani logo kana mucherechedzo.
Hue maringe neMuvara
Hue ndiyo yakachena chimiro chevara, kwete mumvuri kana tint. Hues matsvuku, orenji, yero, girini, bhuruu uye violet. Ruvara izita rinotenderedza rinoreva hue, mumvuri, tint uye toni. Chero kukosha kwehue zvinoreva ruvara.
DPI inopesana nePPI
DPI ndiyo nhamba yemadheti pane peji rakadhindwa. PPI ndiyo nhamba yemapikisheni pamasendimita emufananidzo wedhijitari.
White Space inopesana neNegative Space
Nzvimbo chena ndiyo chikamu che peji rakasiiwa risina kumakwa Inogona kuve chero ruvara, kwete chena chete. Yakashata nzvimbo dhizaini yekushomeka isina chero dhizaini dhizaini kuti ibudise chinoonekwa chisiri.
Wireframe inopesana Prototype
A Wireframe ipurani yedhizaini inoshandiswa kugadzirisa kurongedza uchishandisa sketches kana chishandiso. Prototypes inomiririra chaiyo yezvigadziriso kwaunogona kutaurirana nazvo usati wapedza uye kugadzira chirongwa.
Bitmap maringe neVector
Bitmaps, kana rasterized mifananidzo, mufananidzo usingadzoreke wakagadzirwa kubva pixel grid. Mafomu akajairwa ndeye GIF, JPG / JPEG, kana PNG. Vector magiraidhi dhizaini dhizaini inogadzirwa kubva mafomula uko kunatsiridzwazve kunogadzira hapana shanduko yemhando. Mafomu akajairwa AI, EPS, PDF, uye SVG.
Dema & Chena maringe neGreycale
B / W kana B & W impges inogadzirwa kubva yakachena nhema uye chena. Greycale mifananidzo kana hunyanzvi hune huwandu hwehunhu kubva kuchena kusvika kusviba mune chero tint kana mumvuri.
Kurimwa maringe neZvirimwa Zviratidzo
Kukanganisa kunobvisa zvikamu zvekunze zvemufananidzo izvo zvisingadiwe. Zvirimwa zvezvirimwa mitsara yakawedzerwa pamakona emufananidzo kubatsira maprinta nekucheka uye kuisira.
Wepamusoro 14 Mitemo Isinganzwisisike Inoshandiswa naNoob Graphic Designers
Kana tsananguro yangu pamusoro yanga isingakwani, heino infographic ine mienzaniso:
Tags: Aamina Sulemanadobe illustratoraiKumashureKumashure maringe neRuserikumashureBitmapBitmap maringe neVectorruvaraZvirimwa ZviratidzoKudonhaKurimwa maringe neZvirimwa Zviratidzodhizaini dhizainidpiDPI inopesana nePPIyakavharidzirwa zvinyorwaEPSkuitaFonti inopesana TypefacegradientAkayerera MeshGradient maringe Gradient Meshkwakajeka patanigraphic dhizaini mafomatigraphic dhizaini terminologyhueHue maringe neruvarakuchenjerachiratidzobarkmark maringe neshokologodesignguruNzvimbo isina kunakappizvikabvarasterterminologythinkdesigntinttint maringe netonitoniTrackingKuchengeta maringe neKerningTypefacevectorvector maringe nerasterchena nzvimboWhite Space inopesana neNegative SpacewireframeWireframe inopesana Prototypeizwi
5 Mibvunzo Yekubvunza Yako Yekutsvaga Injini Optimization Consultant
Izvi zvakanyatsoiswa pamwechete. Kudos kwauri naAamina Suleman, basa rakanaka.